Anjaramampionona Mylenah - Takila Malagasy
Anjaramampionona Mylenah (Njarakelly)
Nitsidika : 1929
Tantara toa tsy mitombona nefa ...... !
Tantara iray ty ho tantaraiko ity , tantarako, tantaram-piainako,tantaram-pitiavako. Mampionona no anarako ary 32 aho izao.
Tam’izaho 12 taona no nahafantatra an’i Anjara voalohampitiavako, vadiko, malalako ary tokako eto antany. Iray fianarana izahay. Iz classe de terminale ary izaho classe de 6ème. Niara nianatra tao amin’io fianarana io izahay hatramin’ny fahazazanay. Nisy n elanelana-taona teo amnay satria dia zokiko 7 taona I Anjara .
Tam zany no efa nis ftiavana teo amnay sy anjara, “fitiavanjaza” iany agamba ny tamin’izany. Nahafinaritra ahy tanteraka iz tam’izany. Izy koa moa taty aoriana nivaky tamiko fa nahafinaritra azy koa aho!!! Dia nandeha ten ny fotoana, afaka bacc I Anjara. Ts naita azy tsony aho elaela. Indray asabotsy zay ts ohadinoko mandrakizay. Nifanena tampoka tany Ambaranjana izahay, izy avy nianatra hono, izaho avy namangy an’ilay tantine ako. Tampoka ny nifanenay 2, tena nataon’ny anjara nifanena izahay satria ef nisalasala aho handeha tamin’ilay làlana nampifanena anay, ny andro mafana, izaho izaho irery.
Niara-niverina izahay 2 na dia ts tokony andeha tamin’iny lalan’iny tsony aza i Anjara. Dia nandeha ny resakay, Izy Hono efa mianatra asa, zaho ho’ah anala bepc. D lasa iany n reskay, tsitanay akory oe ariva n andro. D hoy Anjara tamiko, ianao bola kely laotra, tohizo aloha ny fianaranao fa izaho hiandry anao foana, d raha sitrapon’andriamanitra no ahatafaraka antsika 2 dia ts maints ho tafaraka mandrakizay isika. Ts nisalasala aho fa ef resy lahatra tanteraka hoe I Anjara no anjarako!!!! Dia hoy aho taminy “sitrapon’andriamanitra no ahatafaraka antsika fa mino ahy ianao”
D hoy izy tamiko, mianara aloha, d ataovy zay ahazoanao bacc, f za ts hanambady vehivavy ts mianatra tsara zany d manjary ts tafaraka eo ntsika! Za ts hanadalada anao mba hifantohanao tsara amin’ny fianarana. D nanaiky aho satria tena tia an’I Anjara. Nilofo tamin’ny fianarana ihany koa aho mba hitiavany ahy. Tena lava tamiko ny nanala n 3 taona nianarako farany , taorinan’ny bepc ako. Ts nampaninona ahy nefa izany satria izaho nieritreritra n fahasambarako sy ny ho avy mamirapiratra eo anilan’ilay “Anjarako” – I Anjara koa moa nitana ny teny nataony ka tsy nanadala ahy tamin’inoninona. Rehefa tafaraka iny izahay 2 d n mampianatra ahy aza no tena ataony. Natory n fitiavanay fa ts hoe maty akory, ts fantatro aloha na nisy niaraka tamin’I Anjara tan ho any, fa n fantatro d oe tena tiko I Anjara ary ampy ho ahy zay.
Afaka bacc aho. Tahaka ny ankizy rehetra d nanohy fianarana aho. Nifidy n formation mitovy amin’ny an’I Anjara aho satria n tao antsaiko d ny iaraka hiasa amin’I Anjara. Izy moa tamin’izany efa niasa. Dia tamin’izany koa no nanofinofisanay roa hoe hananganana ny asanay manokana rehefa any aoriana any. Ny fiarahanay moa tamin’izany efa fantatrin’ny ray amandreniny sy n ray amanadreniko.
Vita n fianarako ar niasa aho nandritra ny 5 taona. Tena ef matotsaina kokoa aho tamin’izany ka nangataka ahy ho vady andefimandriny i Anjara. To ny nofiko, ts tamim-pisalasalana mihitsy no nanekeko azy sy nirosoanay tamin’ny fombafomba rehetra. Tamin’izany rehetra izany no nivoadiko fa ho an’i Anjara ny androm-pianako sisa rehetra ary ts hitia olona hafa tahaka izay nitiavako azy zay tsony aho.
Rehefa vita mariage izahay d nanainga hanao volantantely ho any Nosy-be ville. Ts hisy teny ahalaza ny hasambarana niainanay tam’izany. Fantatray 2 fa ts hiaina fotoana tokana tahaka ireny tsony izahay. Ao ny sary hanamarina izany fahasambaranay izany.
Tsitahita akory d tapitra n fotoana nijanonay teo Nosy be. Nanatitra anay mivady ilay madame mpiandraikitra ilay chambre d’hôte nofainay. Teo am-piandrasana an’I Anjara naka sary no nirasahanay 2 vavy. Reto tamy zaza 2 lahy mahafatifaty kely. Zanany hono ireo. Toa karana kel n fijery azy, iz roa lahy moa manao ftenina Diégo. D nanontaniako oe iz n anaran drizareo reo, d namaly ny reniny hoe “***” sy “****”. D nanontaniako ilay madame hoe inona no dikan’izany fa ny anaran’olana any mantsy misy dikany daholo, d namaly ahy iz oe iz 2 lahy reo no niaro n tokatranony karazana manda sy rova zane! Tena au bord de la séparation hono iz sy ilay vadiny d izy 2 lahy ireo no nampijanona n vadiny. Hay ve ho’ah mants azy.
Nony tafaverina taty tana izahay d nanao izao karazana projet rehetra rehetra zao!!!!!! Ny nofinay voalohany indrindra d n oe hiteraka! Ef manana anarana be dia be izahay ra lahy na vavy fa vavy moa no tena tianay é : Fitia, (ho marikin’ny fitiavanay 2), tamby, Mylenah, vanessa, Sombiniaina, Hanoisoa. Fa ny tena naharesy lahatra anay d ilay anarana oe Anjaramapionona, ny anaranay2 natambatra. Dia hoy I anjara oe ra miteraka ntsika 2 dia atao hoe anjaramampionona Mylena zany!
Tanteraka koa n nofinofy nay mivady d n oe anangana n orinasanay kely nay. Kel iany tamin’ny voalohany an! Fa natsarenay tsikelikel de tafa iany taminy farany iz gérant d zaho assistante ny. Tao anaty ny taona vitsivitsy dia nahatsagana zavatra maro izahay sy Anjara.
Ny tena nahafinaritra ahy tamin’I Anjara dia ny fitiavany miasa. Tena ts mitandro hasasarana mihitsy izy hanatsarana hatrany ny fiainanay. Tsy ory niononinona aho ary na dia ny fotoana sarotra ary dia nanjary mora taminay n niatrika izany.
Izaho moa dia niezaka nitana ilay taille fine ko iny mba tsy hisy zavatra miova amin’ny fiarahanay sy anjara hany ka “toy ny vao omaly foana ny fitiavanay”
Dia nandeha teny n fotoana: ny sengondra nitambatra ho minitra, ny minitra nivadika ho ora, ny ora nivadika ho andro, andro maromaro nanome volana. Volana maromaro nitambatra ho taona. 5 taona izao no nivadianay sy Anjara. Indrisy anefa, tsy mbola tanteraka ny nofinafinay iray d ny hoe hiteraka. Toa zary nofinofy sisa izany. L’argent ne fait pas le bonheur! Fa na dia nanana ny ampy ary aho d tsapako fa nisy banga ny fiainako !!!!!!!!! Variana tamin’ny fitadiavana loatra angamba izahay 2. Harena ho an’iza nefa? Fananana atao inona? Mitsiriritra ery aho mahita ny zanak’olona, na dia tsy irony mahafatifaty irony aza.
Nanomboka teo dia ny hiteraka no tanjonay sy I Anjara. Tsy ahonay intsony zay ho avy eo na lahy na ho vavy fa rehefa misy fotsiny dia ça va!!!!!!!!!
Nataonay daholo ny fitsaboana rehetra satria araka ny fizahana dia antony ara-pasalamana no tsy mampiteraka anay 2. Nandany vola amankarena izahay 2, ts nanenenako izany ary mino aho fa tsy nanenenan’I Njara koa.
Kanefa, marina tokoa ny hoe ts mahavidy ny torimaso ny fandriana tsara tarehy, ts mahavidy ny fahendrena ny fananana boky ary ny hoe ts maavidy ny aina ny vola. Nandany vola izahay fa tsy nisy vokany. Rava tanteraka ny nofiko, kivy aho mieritreritra hoe ts ho afaka hitrotro zaza zany reto sandriko reto, ts afaka hitaiza na hanafosafo na hanambitamby ny tanako. Tezitra mafy aho, ary nesoriko daholo ireo firavaka sarobidy tamin’ny rantsatanako. Atao inona hoy aho? Atao inona? Tezitra tamin’ny fiainana koa aho, firifiry moa no ts maniry hiteraka intsony nefa dia mbola mitoejaza ihany ? firifiry no te hanana nefa tsy mahazo na iray aza? …… Ary inona no ratsy nataoko no dia faizina toy izao aho.
Kivy aho! Ary ts haiko nafenina izany hakiviko zany, lasa niova tanteraka na ny toetrako aza. Mitsiky fona aho nefa ny ao anatiko ao rotitrodiki’ny alahelo tanteraka . Resy aho, resin’ny anjarako!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nanampy trotraka izany fahakiviko izany ny fiahiahin’ny fianakavin’I Anjara ny fitondratenako talohan’ny nanambadiako an’I Anjara. I Anjara anefa no voalohampitiavako ary fantany tsara izany;
Tsapan’I Anjara tsara izany fahakiviko zany. Ary niezaka nampionona sy nampifalifaly ahy izy! Fa zay ho’ah: tsy nahavidy ary tsy hahavidy ny fahasambarana ny vola, sy ny fiara, ny trano be, ny firavaka na akanjo na dia sarobidy tahaka ny inona aza! Tsy hahafeno ny banga mihitsy. Ny manome toky ahy no ataony ts ankijanona. Ts hanary ahy mihitsy hono izy na dia ts manana zanaka azy izahay fa ho vadiko mandrakizay.
Hany herinay nananganjaza. Ts nitady lavitra izahay 2 fa nisy zanakin’ny cousine an’I Anjara zay natsaganay. Maty teo am-piterahana azy ny reniny. Dia nokarakarainay ny taratasy rehetra ary nataonay hoe: Sombininaina no anarany. Tsy tena ampy ampionona ahy ny fisiany nefa faly aho manana azy. Enfin,nisy feonjaza nitomany tao amin’ilay trano be anay mivady. Tsy nisy nahory an’I sombiniaina. Tena zanaka tokoa iz tamiko sy Anjara.
Indray zoma hariva izay nandeha tany amin’ny birao an’I Anjara zaho sy sombiniaina hanao surprise sy hitsena azy. Nosakanan’I Hanitra sécretaire aho oe mbola misy olona ao amin’ny bureau-any, Iza hoy aho, hoy izy hoe : Mr Haja. Naman’I Anjara hatramin’izay I Haja, iz ary no témoin’I Anjara tamin’ny mariage nay. saika handodona azy aho kinanjo henoko tsinahy ny resak’izy reo
Hoy I Anjara: Rehefa faly fotsiny lesy I Mampionona dia efa ampy ahy zay an! Za ary teo ef kivy mihitsy hoe inona no ataoko ho azy! D namaly I haja hoe: marina zany loha é! Fa izao hafa ihany ho’ah zany hoe tena an’ialahy zany, misy rà an’ialahy mikoriana ao aminy. Taitra aho ka voatosiko tsy nahy ny varavarana d niditra izahay sy sombiniaina. Tsy nampoiziko ny tenin’I haja. Nifampiarahaba izahay ary tsikaritro fa niova ny oroka fanaon’I Anjara an’I sombiniaina.
Andro vitsivitsy taty aoriana, niova mihitsy ny fandraisan’I Anjara an’I Sombiniaina. Nitohy ho volana maromaro izany. Tsy te halalala ny momban’I sombiniaina intsony izy ary fandre matetika tao antokatranonay ny hoe “hafa iany ny an’ny tena” Na izaho koa aza toa fitserana fotsiny iany sisa no itiavany ahy. Toa obligation fotsiny ny iarahanay é! Aleon’I Anjara mandany ora maromaro hisana mafy toy izay hijanona tao an-trano. Nanjary niafiafy kely izahay mianaka. 2 taona zao I Sombiniaina, rehefa nandinika lalina, dia tapa-kevitra aho fa hisaraka amin’I Anjara. Tiako izy, fa nahoana moa izy no hofaiziko na hotereko hiara mandany ny fianany amiko, izaho izay tsy nahazoany taranaka, ary tsy tiako koa hoe I sombiniaina no hibaby ny anjara ratsinay.
Amiko raha tena tiana ny olona 1 dia katsahina hatrany ny hasambarany. “ny hasambarana tsy hoe fodiana adala mody tia, ny hasambarako dia fantatro fa ts eo anilanao. Ny hasambaranao ry olon-tiko, eny antsadrin’olokafa, ny hasambaranao no ekeko ho ahy….” Hoy ilay hira izay. Fantatro fa ts eto anilako ny hasambaran’I Anjara na dia tena tiko aza izy ka aleoko mitsodrano azy.
Notsoriko tamin’I Anjara izany ary tena nampahory azy tokoa. Izaho ary ry Mampionona ts nanana an’izany eritreritra izany na dia 1 segondra aza, dia ianao dray no miteny an’izany hoy izy. Aoka hoy aho ts hiaina ao anatin’ny lainga isika fa fantatsika sy ianao tsara fa tsy sambatra sika izao, miara miaina fotsiny satria voafatotra fa ny fitiavana toa efa tsisy intsony.Niaiky tanteraka I Anjara fa marina izany. Kivy tantaraka hono izy ary mila hanao dérapage mihitsy tato ho ato f misy banga ny fiainanay. Ry mpamaky, tsy noheveriko ho toy izany mihitsy ny vokany raha tsy mifampiteraka ny couple 1, enoko fona hoe misy mpivady tsy miteraka d oe mampalahelo be, fa ankehitriny izaho mihitsy no miaina izany dia tena fatatro n dikany, sy ny fijaliana rehetra noho ny tsy fiterahana.
Dia hoy I Anjara nanohy ny teniko, Mampionona, na eo ary zany rehetra izany, zaho ts hisaraka aminao mandrakizay. Nekeko ianao teo antrehan’ny alitara fa na amin’ny mora na amin’ny sarotra dia ho vadinao aho, ho eo anilanao. Tsia hoy aho, aleo tsika tsy hiaina ao anaty lainga na mody hiseho ho sambatra satria efa tsy misy fitiavana intsony fa fitserana no mitombo isan'andro
Ary sao dia ianao ary no efa tia olonkafa any dia satrinao hisaraka amiko hoy izy? Tsia hoy aho, diso tiako loatra aza ianao ka ts tiako ianao hijaly eo anilako. Ts afaka hanome fahasambarana anao aho fa any ho any misy anjaranao vaovao! “une femme qui saura te combler, qui te donnera tous ceux je n’ai pas pu te donner ” Je te souhaiterai tous les meilleures de ce monde cruel. Et peut-être, nous restons des amis, de meilleurs amis. Nanganohano ihany ny masoko niteny azy izany. Nanganohano koa izy, ary i Sombiniaina moa nipitrapitra fotsiny. Nifandresy lahatra teo izahay ary farany dia resiko lahatra izy. Tao anatiny lalina tato ts mahafoy ahy nefa koa maniry fiainambaovao. Hatao aona, zay no fiainana! Vonona izahay hiroso amin’ny divorce. Ho atao farak’izay haingana, zay no tapakay farany. Iny alina iny no niarahanay farany.
Ny nandresy lahatra ny fianakavianay no tena olana. Ny fanontaniana voal ohany dia hoe”fa naninona I sombiniaina. Ts takan’izy reo mihitsy hoe tsy sombiniaina no olanay sy Anjara.
Ny fianakavian’I Anjara faly ny akamaroany indrindra f ny reniny. N ahy kosa niezaka namerimberina hoe fa anga dia tsy nisy vahaolana intsony é, mbola tsy tara izao. Mbola afaka manamafy ny fitivanareo inareo 2.
Tongotra efa by andakana nefa ny ahy sy anjara ary ts iverina intsony. Satria moa misy ny vola dia ts nananosarotra ny fikarakarana ny fisarahanay. Nahazo anjara be dia be tamin’ny fanananay aho asa, mba ampaginana ny conscience any I Anjara angamba. Azoko daholo ny fanananay tany amin’ny province. Izaho moa nanapakevitra ny hanorimponenana any diégo rehefa vita ny divorce mba ts haatsiarovako ary hanadinoko tanteraka ny lasako niaraka tamin’I Anjara. Ny hany nagatahako dia ny hamelana ahy hitsidika an’I sombiniaina na dia rehefa manambady aza I Anjara. Sombiniaina moa d najanona tamin’I Anjara.
Tonga ny fotoana hanononana ny fisarahanay tao amin’ny fitsarana. Nandeha aho satria te hahita faramparany an’I Anjara. Toa tsy foiko tampoka izy nefa mino aho fa nety ny safidiko.
Dia reo zahay mifampijerijery; ny masonay no mifanojo matetika ary toa mifampiresaka. Toa milaza amiko ny masony hoe dia horavaina tsotr’izao toy izao fotsiny ve reny hasambarantsika sy dry reny ?
Fa tampoka teo, mangovitra aho ary nivadika tamiko ny tany amandanitra! Ny tsaroko farany dia ny rafozambaviko nilaza oe aza be cinéma eo dry!
Nifoha aho tany amin’ny hopitaly. Gaga aho, I Anjara no mitazona ny tanako. Famisy inona hoy aho? Niditra avy any ilay infirmière d nilaza taminay hoe betsaka mihintsy ny vehivavy amin’izao tsy malala intsony na tsy mandraraha ny toe-batany ka miteradoza.
Fa maninona aho hoy aho tsy misy farany,fa nataonareo inona aho? Misy zaza mitsaika ao anaty kibonao hoy I Anjara tamiko. Firy volana hoy aho, 1 volana hoy ilay infirmière! Fa nahoana no tsy nahafataranao zany? Miovaova be ny toebatako tato ato tompoko ka ts fantatro intsony, betsaka koa ny traitement nataoko hoy aho. Manomboka izao ianao d arahamaso tanteraka, mila misafo ianao d ……….tsisy henoko intsony fa toa noheveriko oe manofy aho. Teo anatrehan’ny fianakaviana teo no nilazan’I Anjara fa ahemotra ny divorce anay. Tsy ahemotra hoy izy fa ajanona tanteraka mihintsy , sady vao maika nofihininy mafy ny tanako.
Tsy hisy teny hahalaza ny fahasambaranay 2. Na teo aza ny fianakaviana rehetra dia otran’ny hoe zay 2 irery no tety ambonin’ny tany!
Saika nanahirana indray ny nanemotra ny fisarahanay 2. Soa fa nisy ny vola fa tena nandoa vola be zay satria nanao outrage à la loi hoe hisaraka dia aveo tsy hisaraka indray. Le avocat an’I Anjara moa dia niteny oe zaza maroroka izahay! Ny ahy dray nilaza oe tena ts tian’Andriamanitra hisaraka izahay. Izy moa ef nandresy lahatra ahy ihany hatrany ampiandohana hoe tsy tokony hisaraka amin’I Anjara aho.
Tsy andrinay zay ahaterahako. Ary I Anjara ary lasa zara fa miasa. Isan’andro dia misy zavabaovao foana hoetiny ho ao antokatranonay ho an’ilay zazakely hoavy. Zaho dray no toa adino, eny é, mahazo robe isakarazany manko zao é, de toute les couleurs mihitsy ny robe de grossesse ko satria bedin’I Anjara aho raha vao nanao pataloha na dia mbola kely aza ny kiboko. Tsy nanao echographie mihitsy za fa dia hoe alao ho surprise ozy njara. Vavy kely moa no fanirianay ka akajom-bavy no tena betsaka. Voalohan-jaza é, sady efa ela niriana! Tsy adinon’I Anjara koa anefa sombiniaina fa dia nahazo tambitamby sy ny anjarany ihany koa.
Dia teraka aho rehefa avy niaina ny zavatra niainan’ny vehivavy mitoe-jaza rehetra. Tao amin’ny hopitaly aho no niteraka ary ilay rasazy nanaraka ahy atramin’izay ihany no nampiteraka ahy. Izy moa ef nafaranay tsy hilaza ninoninona mihitsy. !!!!! D in naseho ahy ny zanako, menaky ny aiko, ty hoy izy no voalohany. Lahy kely somary diso fanantenana aho nefa heniky ny hafaliana tokoa. Aveo aho taitra, fa zaza voalohany ahoana? Ty ny faharoa vavy kely, torana soamantsara aho ary nantsoina I Anjara.
Tonga saina aho avy eo, hoy rasazy ; iza no atao anran’ireto zankindry reto? Zaho moa reny nasaina nanakombom-bava koa, dia maro ve ny lambanjaza ao d mba natao nifangaro araka ilay teniko ve?
Tsaroko tampoka ilay resaka nifanaovako tamin’ilay madame tany Nosy be, Rova hoy aho ilay vavy raha manaiky ny rainy dia Manda ilay lahy. Dia hoy I anjara: Andriamanantsoa Rova candhy ilay piso kely io, d Andriamanantsoa Manda Ryan le cof boay kel atsy. Somary kelikely iany izy dahy zay no ts naafantarako oe kambana ny zaza tao ankiboko. Iny eny tamy avy any I sombiniaina sy ny rafozako sy ny raiko, noraisiko sombiniaina ary nofihiniko mafy sady nilazako hoe nahazo zandry dry ! Idada nitondra akanjo vitsivitsy miloko manga ho an’I Manda. Samy tototrin’ny hafaliana izahay ary na dia ny rafozako aza faly tsy nisy ohatr’izany na dia teo aza ny disadisa nisy teo aminay.
Afaka herinandro nody izahay. Efa vitan’I Anjara milamina avoko tato antrano. Kilalao zany, tahaka ny oe afaka hilalao an’ireo ny androany dia androany ihany reto zaza.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Arifomba daholo ny fitaovana nitaizako reo zanako ireo hany ka vetivety dia nihalehibe izy reo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!toa tsy mampino hoe reo ilay totozy kely tany amin’ny hopitaly. 2 taona zao izy mianadahy ary miara-manamafy ny fifankatiavanay sy I Anjara. Ts oe tsis problème mihintsy izahay an fa tena mahatsiaro fahasambarana tanteraka. Ts adinoko ko I sombinaina kely 4 taona izy zao. Miertretritra izahay sy Anjara hoe rehefa lehibe eo ny ankizy dia ho ampidirina crèche. Dia izaho iverina hiasa hanampy azy. Ho haverinay indray reo fombafombanay taloha tamin’izahay mbola niaraniasa.
Mody masoandro! Avy natory kely iz telo teo dia reo fa mihazakazaka ho any an tokotany. Eto andavaragana aho izao mijery azy telo mianadahy milalao. Fa tena fahagagana tokoa hoe izao zay tsy nanana na zaza iray aza no manana 3 be izao ankehitriny. Tena fahagagana, satria firy taona moa no nolaninay sy Anjara nitsaboana tena ary oatrinona ny vola laninay? Tampotampoka teo anefa bevohoka aho comme par miracle. Ahoana no nahapossible ny hoe niteraka aho? Ts misy mystery amiko izany na dia kely akory aza. Zaho mahafantatra ny zavadrehetra fa aoka izany ho tsiambarateloko, ho tsiambarateloko izaho samirery! Ny fatatro fotsiny dia hoe nivoady aho indray zay andro hoe hanavotra ny tokatranoko amin’ny fomba rehetra. Aza mitsara ahy ! Ho ajanoko ny penina fa misy mampaneno sonnerie izany, ié io eny I Anjara vady malalako. Ary pizza zany hoentiny izany! Andeha hanokatra azy aho!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#1 14/12/2019 14:59:03
Nandalo kely aho dia nahatazana ny lohateny dia nanopy maso ny fiandohany, kanjo tavela namaky hatramin'ny farany.
Mampahatsiahy ahy namako frantsay izy mivady. Nanan-janaka vavikely izy ireo saingy nodimandry teo @ fahatelo taonany. Tsy nahazo intsony izy ireo taona maromaro fa misy koa moa ilay stérilité temporaire manjo ny vehivavy (ny lahy koa ve ???)
Nanapa-kevitra zareo nony farany hanangana, ka zaza gasy no nosafidianjareo. Nahazo vavikely iray zareo dia nanangana iray faharoa afaka 3 taona, vavikely ihany. Kanjo 2 na 3 taona taorian'izay dia nitoe-jaza indray izy. Vavikely. Ary angamba hampifandanja ny isa ao an-trano dia nanao zaza faharoa zareo, vavikely ihany koa.